सहारा नेपाल साकोसबाट चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँको पशुबीमा - Sajhamanch
२०७९, आषाढ ११ गते बिहानिको ०५:०५:४१ बजे Friday 24th June 2022
झापा । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना उद्यमी सदस्यहरुले पालेका ३ हजार वटा पशुहरुको पशुधन बीमा गराई दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म करिब ६ करोड रुपैयाँ हाराहारीको पशुधन बीमा गरिएको हो ।
संस्थाले प्रदेश १ को झापा–इलामदेखि उदयपुरसम्मको चुरे क्षेत्रमा बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संस्था अन्तरगत एग्री विजनेश युनिटका प्रमुख डा. कमलेश्वर भाटले सहारा नेपाल साकोस आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा १० हजार उद्यमी सदस्य बनाउन अग्रसर रहेकाले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी तथा सेवामा वृद्धि गरिरहेको जनाएका छन् ।
डाक्टर भाटका अनुसार जेठ महिनामा मात्र कार्यक्षेत्रका ९ स्थानमा बाख्रा तथा बंगुरपालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिममा बाख्रा तथा बंगुरको खोर व्यवस्थापन, दाना तयारी, रोग लागेमा गरिने प्राथमिक उपचार विधिहरु समेटिएको तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त तालिममा ३२० जना किसानहरु सहभागी भएर प्रयोगात्मक तालिम लिएका डा. भाटले जनाए ।
उक्त तालिमहरुमा करिब ७ लाख रुपैयाँ बराबरका पशु चौपायालाई खुवाउने औषधि पनि निशुल्क वितरण गरिएको थियो । पशु चौपायाका लागि भिटामिन, नाम्ले र जुकाको दबाई, खनिज मिश्रण, लिभर टनिक, सर्पोफोरल, गोल्ड आदि औषधीहरु वितरण गरिएको डा. भाटले जानकारी दिए ।
गत जेठ महिनामा नै संस्थाको कार्यक्षेत्रका ५ स्थानमा धानको ब्याड राख्ने तालिम पनि सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त तालिममा सम्बन्धित भूगोलमा उत्पादन हुने धानको जात अनुसार ३ हजार केजी विउ पनि किसानलाई निःशुल्क प्रदान गरेको डा. भाटले जनाएका छन् ।
संस्थाले यो वर्ष एक हजार ५०० उद्यमी सदस्यहरुलाई २ केजीका दरले सुडान जातको घाँसको विउ पनि प्रदान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा संस्थाले पशुपन्छी सम्बन्धी धेरै रचनात्मक एवम् व्यवसायिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको डा. भाटको भनाई छ ।
June 22, 2022 11:08 am | अर्थतन्त्र,मुख्य समाचार,राष्ट्रिय समाचार,सहकारी